Banijya News | » विशेष विशेष – Banijya News
नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा आज अन्तिम कसरतमा छन् । उनलाई जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको अगुवाईमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तिम अस्त्रका रुपमा बाधक बनाएका छन् । प्रधानमन्त्री ठाकुरले ओलीको आडमा कुनै हालतमा पनि देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिने कसम खादै आएका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई जसपाको नयाँ सरकार निर्माणमा…
काठमाडौं, २९ बैशाख ।रुपन्देहीको बुटवलस्थित धागो कारखानामा सञ्चालित कोरोना विशेष अस्पतालमा अक्सिजन नपाउँदा पाँच जनाको मृत्यु भएको छ । अस्पतालको आईसीयूमा १६ जना उपचाररत थिए । ती मध्ये पाँच जनाको मृत्यु भएको हो । आधा घण्टा ढिलो अक्सिजन आपुर्ति हुँदा आईसीयूमा उपचाररत ४ जना पुरुष र एक महिलाको मृत्यु भएको हो । अस्पतालमा माग अनुसार…
अमेरिकी सरकारको सहायता कोष मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन (एमसिसि) प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले संसद सचिवालयमा टेबल गरेको छ । सरकारले प्रस्तुत गरिसकेपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नु कानूनी परम्परा हो । सभामुखले यस्लाई निणयार्थ सांसदमा टेबल गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओली स्वमंपनि सरकारले प्रस्तुत गरिसकेपछि संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत नगर्नु भनेको असंवैधानिक हुने तर्क गर्दै आएका छन् ।…
सत्ता उथलपुथलको समय पपुलिष्ट बजेट बनाउँदै अर्थमन्त्री पौडेल
काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल अचेल सार्वजनिक कार्यक्रममा कमै देखिदै आएका छन् । एमालेको विवाद मिलाउने क्रममा बाहेक उनी कुनैपनि कार्यक्रममा देखिएका छैनन् । एमालेका दुई नेता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र बरिष्ठ नेता माधबकुमार नेपाललाई मिलाउन र त्यस्को संवादको...
अक्सिजनको अभावमा शुक्रवार भक्तपुरमा दुई जना कोरोना सङ्क्रमितको मृत्यु भयो । अस्पतालले अक्सिजनको व्यवस्था गर्न नसक्दा भक्तपुर कौशलटारस्थित भक्तपुर इन्टरनेशनल नेपाल अस्पतालमा उपचारका लागि भर्ना भएका दुई जना कोरोना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ । बजारमा यतिखेर अक्सिजनको अभाव भएका समाचार...
सत्ता परिवर्तनको खेल प्रदेशबाटः कुन प्रदेशमा कस्तो समीकरण बन्दै ?
काठमाडौं । सत्ता समीकरणको खेल प्रदेश सरकारमा देखिएको छ । केन्द्रीय राजनीतिमा देखिएको खिचातानी र नेताहरुको अहंताको प्रभाव अव प्रदेश सरकार परिवर्तनको खेलमा पुगेको हो । केन्द्रमा सरकार परिवर्तनको लामो खेल संचालन भएपनि कुनै असर नदेखिएको समय बिहीबार गण्डकी प्रदेशका...
पानीपरेसँगै काठमाण्डौ उपत्यका लगायत देशभरको वायुमण्डलबाट प्रदूषण हटेको हो ?
गत शुक्रबार देखि काठमाडौ उपत्यका देखि देशका विभिन्न क्षेत्रको बायुमण्डल नराम्ररी प्रदूषित हुन पुगेको छ । बायुमण्डल नराम्ररी बिग्रिएकै कारण काठमाण्डौँ लगायत देशको मुख्य शहरहरुमा तुवाँलो लागेको हो । जस्को कारण काठमाण्डौँ साथ साथै देशको थुप्रै ठाउँको वायु प्रदुषित हुन...
ओली–नेपालको ४७ बर्षे सहयात्राः ओलीले नेपालको सांसद पद मात्रै खोस्लान की ? दुई किनारा भएर जालान ?
‘हामी नदीका दुई किनारा, हाम्रो सङ्गम असम्भब छ …’सुदेश शर्माको यो गित यतिखेर नेपाली राजनीतिमा ठयाक्कै लागू भएको छ । डेढ वर्षअघि भदौदेखि सुरु भएको सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का नेता माधव नेपालको खटपटले अहिलेसम्म...
काठमाडौंबासीका घरमा मेलम्चीको पानीः यसरी हुँदैछ धारामा वितरण
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी काठमाडौंका धारामा वितरण गर्न थालिएको छ । २२ वर्षदेखि काठमाडौं उपत्यकावासीले देख्दै आएको मेलम्ची पानीको सपना साकार बनाउदै मेलम्चीको पानि उपत्यका वितरण शुरु भएको हो । सुन्दरीजलको पानी प्रशोधन केन्द्र र चक्रपथमा विछ्याइएको थोक वितरण पाइपलाइनहरूको...
Page 1 of 2511234Next ›Last »